မွတ်ဆလင်မ တစ်ယောက်မှ တောင်းပန်စာ (ပေးစာ - ၁၄၉) ~ Myanmar Express
From : adio.amigos123@gmail.com
ဒီစာကိုရေးလို့ ဆဲတာ ခံချင်ခံရနိုင်တယ် ဒါပေမဲ့ ဆဲချင်ရင်တောင်မှ အဆုံးထိသည်းခံဖတ်စေလိုပါတယ်
နည်းနည်းလောက်ခံစားပေးကြည့်ပါ ကုလားတွေဘုန်းကြီးကျောင်းကို မီးရှိုလိုက်ပြန်ပြီလို့ ကြားတိုင်း တိုင်းရင်းသားမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရှေ့ မှာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ နေရတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ ကျွန်မက မွတ်စလင်ပါ
ဒါပေမဲ့ကျွှန်မက အဖျက်သမားမဟုတ်ပါဘူး ကိုနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာကိုစော်ကားဖို့ မပြောနဲ့ မနောကံနဲ့ တောင် မပစ်မှားဖူးပါဘူးမွတ်စလင်တစ်မျိုးသားလုံးအဲ့လိုပဲလို့ မဆိုလိုပါဘူး ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်တိုင်း အဖျက်သမားမဟုတ်ပါဘူး မွတ်စလင်တွေကိုလည်းပြောချင်တယ်ခုရိုဟင်ဂျာကိစ္စက သာသနာ့စစ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး တိုင်းရင်းသားအမည်ခံပြီးနယ်မြေလုချင်တဲ့ လူမှု့ ရေးစစ်ပွဲပါ အဲ့တာကို ဂျေဟာဒ်လို့ မခေါ်ပါဘူးရိုဟင်ဂျာတွေက ဒီအရေးကို မွတ်စလင်တိုင်းပါဝင်စေချင်တဲ့ သာသနာ့စစ်ပွဲအသွင်ပြောင်းစေချင်တာကို သိသင့်ပါတယ် မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်သမားတွေကြောင့်
ကျွန်မတို့မွတ်စလင်တိုင်း သူများအကောင်းပြောစရာတစ်ကွက်မှမရှိတာမွတ်စလင်တိုင်းသိမှာပါ အဲ့ဒီကို့ ဘာသာ သာသနာကိုဖျက်တဲ့ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်သမားတွေကို မြန်မာတွေ ရိုဟင်ဂျာမုန်းတာထက်ပိုမုန်းပါတယ်
ကျွန်မက မြန်မာပြည်ဖွားတိုင်းရင်းသား မဟုတ်တာက လွဲလို့ သင်တို့မြန်မာပြည်ချစ်သလို ကျွန်မလည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်မကမြန်မာပြည်သားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာပဲ မွေးပါတယ် မြန်မာပြည်က
ရေကိုပဲသောက်ခဲ့တာပါ မြန်မာပြည် အကျိုးယုတ်စေမယ့် ကိစ္စ်ကို မလုပ်ပါဘူးမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာ နေလာတာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ကျော်ပါပြီ မြန်မာပြည်ကိုဒုက္ခမပေးပဲအေးအေးချမ်းချမ်းနေပြီး ကျေးဇူးဆပ်ချင်ပါတယ်။
Myanmar Express Posted in: ပေးစာ
12 June 2012 19:54
အခုလိုအမြင်မျိူး မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သော မွတ်ဆလင်လူမျိုး အားလုံးမှာရှိနိုင်ပါစေလို့..........ဆုတောင်းပါတယ်နော်။ (အဓိကကတော့ ငါတို့မြန်မာပြည်ကြီး ဒီလိုဘေးရန်ဆိုးကြီး ကနေအမြန်ဆုံးကျွတ်လွတ်ဖို့ကိုပဲ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်နေကြတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းတွေ ၀ိုင်းဝန်းဆုတောင်းရမှာပေါ့............)
12 June 2012 20:22
ခေါင်းဆောင်လေး ဆောင်းမှ အလာ ရဲ့ အမိန့်အတိုင်း ဖြစ်တော့မပေါ့...မွတ်စ်မလေးရယ်..
12 June 2012 20:26
myanmar pyi mhar born yin , myanmar pyi thar par , but myanmar lu myo tot ma hote par, so , nyi ma la ka , myanmar pyi thu ta yauk ,myanmar tine yin thu tot ma hote bu pot ,
ကုလားမလေး. နင်က အရမ်းချောတော့..ဒီစကားတွေပြောထွက်တာပေါ့ဟ..ဟိုကုလားတွေက.. နင်လောက်မှ မချောတာကို... မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေ အချည်ကြီးနဲ့. ဆိတ်ကြီးကျနေတာပဲ...ငါပြောတာကို စိတ်ဆိုးရင်.. သီချင်းလေးဆိုပြီး အိပ်လိုက်နော်..ကူရ.. ကူရ.. အလာ..အလာ...၀တ်သားစားချင်တယ်... ဆိုပြီး အော်ဆိုပြီး အိပ်လိုက်နော်.. စိတ်ညစ်ပြေသွားလိမ့်မယ်...
12 June 2012 21:09
လေးစားလောက်ပါတယ်..တိုင်းပြည်ကရေသောက်ပြီး ဒီလိုစိတ်မျိုးမွေးနိုင်တာ ချီးကျူးလောက်ပါတယ်.. ကို့ညီမကိုသတိပေးရအုန်းမယ်... မင်းအမျိုးတွေကိုသတိထားအုန်း.. ဒီအကြောင်းရေးလို့.. မင်းကိုဝိုင်းသတ်နေအုန်းမယ်...ခွေးမသားတွေ..တွေးရင်းနဲ့ကို သတ်ချင်လာပြီ ရိုဟင်ဂျာခွေးကုလား..
လေးစား ဂုဏ်ယူ ပါတယ်
12 June 2012 21:44
ဒီလို ကိစ်စမျိုး ကို မင်းလိုမိန်းကလေး မျိုး မပါဝင်သင့်ဘူး ။ မင်းလိုဖြုတ် အုံးနှောက်နဲ့ ဒီလိုကိစ်စ မျိုးနဲ့ မဆံ့ဘူး မတန်ဘူး ။ အဝေဖန်နဲ့။
12 June 2012 21:46
မင်းပြော တာမှန် ပါတယ် မိန်းကလေး။
We know how you feel. We, Myanmar Buddhists are not fighting with Islamic group just protect our motherland from the hand of Rohingas.
12 June 2012 21:55
ပြောတာပဲ ကုအမ်ကျမ်းက ဘာသာခြားကို အလ္လာအတွက် သတ်ရတဲ့ မင်းတို့မူဆလင်တွေ အကျင့်ကို ကောင်းတယ်တော့ ပြောလို့ရမတဲ့လား
12 June 2012 22:55
Wish every muslin to be like you.
12 June 2012 23:05
မင်းပြောတာတွေကိုလက်ခံတယ် ဒါမဲ့ မွတ်စလင်တိုင်း မင်းလိုဖြူစင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်....
13 June 2012 01:07
Really appreciate for your wide vision and wish everybody can follow you.
13 June 2012 06:13
thank you for your good idea with our myanmar country.you will be grade on one day. you right its not Muslim and Buddhism problem. it is immigration or clonal problem. you are myanmar citizen you need to be care about your country or your land
13 June 2012 06:22
al di lo ma pyaw bar nae thu nae chin..toe tat taw sat dat tar bar ma koung thu nae koung thu kwe char sat san bar.. ngar ka ya khaing sit sit bar dar bay mae law ka mar ma kaung thu nae kaung thu shi dal..ma koung thu ko ngar doe tom lun kya soe ..
13 June 2012 08:40
မှန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့နေလာကြတာကြာပါပြီ။
မွတ်ဆလင်တွေက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းပဲ။ ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာမွတ်ဆလင်မပါဘူးဆိုတာ သူတို့အနေကြပ်မှာစိုးလို့ပါ။ မွတ်ဆလင်တွေအကုန်လုံးက ကမ္ဘာ့ရန်သူဆိုတာ လူတိုင်းသတိထားရမှာပါ။ သူများဘာသာကို မွတ်ဆလင်နိုင်ငံလုပ်လိုက်တာ ကမ္ဘာမှာမရေတွက်နိုင်ဘူး ဖြစ်သွားပြီ။ မြန်မာတွေအကုန်လုံးမွတ်ဆလင်ရန်မှ ကာကွယ်ရမယ်။။။။
Ok,Thank u for your rising up.If you love myanmar country,you should protect myanmar country.At that time everyone will appreciated your being so.
13 June 2012 12:16
သူ တို့ဟာ သူတို့ကိုဆေးကုပေးတဲ့ ရခိုင်ဆရာဝန်ကိုသတ်တယ်၊စာသင်ပေးတဲ့ ဆရာ/မတွေကိုသတ်တယ်၊ ထမင်းကျွေးထားခဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုအိမ်ဖော်မကသတ်တယ်။ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အကျင့်ကိုသိချင်ရင် အခုအသတ်ခံနေရတဲ့၊ အသက်အိုးအိမ်ဖျက်ဆီးခံနေရတဲ့ ရခိုင်တွေကိုသာမေးကြပါ။ စကားလုံးလှတွေနဲ့ချော့တာထက်လက်တွေ့ကျဖို့သာလိုပါတယ်။ယုံလို့ပုံအပ်လို့ကတော့ အမျိုးတုံးမှာသေရှာတယ်။
13 June 2012 12:39
အစ်မက တရားဟောကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် အစ်မကိုယ်တိုင်တောင် Demographic Jihad လုပ်ဖို့အတွက် မိုဟာမက်ထွင်ခဲ့တဲ့လူဖောက်စက်ပဲမလား အစ်မတို့လူမျိုးတွေ ဘာသာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေး မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး လူသက်ရှိအားလုံး muslin ဖြစ်မှအဆင်ပြေမယ့် မိုဟာမက်ရဲ့ဝါဒကိုအရင်ပြင်လိုက်ပါလား နောက်တောင်းပန်စာရေးရင်လည်း မိုဟာမက်ရဲ့ ၀ါဒအပေါ်မျှမျှတတ မြင်တဲ့အမြင်လေးတွေလည်းထည့်ရေးပေါ့
မင်း ရဲ့ စိ တ်‌ ထား ကို လေး စား ပာ တယ်‌
ဗမ်း သာ ပာ တဃ်‌
13 June 2012 13:33
အားလုံ ကိုဒီလိုခံယူစေချင်ပါတယ်။ညီမလေး ကိုယ်မိဘက မွတ် မို့ လို့ မွတ် တာလား။ညီးမလေးဘာသာကိုသေခြာလေ့လာပြီးရင် တခြားဘာသာကို သေသေခြာလေ့လာကြည့််ပါ။ဘယ်ဘာသာဝင်ကိုမှ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရားက မကောင်းတာ လုပ်ဖို့ မတိုက်တွန်းလောက်ပါဘူး။
13 June 2012 13:51
13 June 2012 14:27
13 June 2012 16:53
အ မ ပြော တာ မှန် ပါ တယ်
13 June 2012 17:47
ညီမလေးက ချောလိုက်တာ... မြင်မြင်ချင်း ခိုက်သွားပြီကွာ... ဘာစားချင်သလဲပြော အကိုကြီးဝယ်ကျွေးမယ်.. ဝက်သားတုတ်ထိုး စား မလား ၊ ဝက်အူချောင်းကြော် စားမလား...
13 June 2012 18:36
I agree with u. This is notareligious issue. We should treat Rohingya as they really are, they are justabunch of terrorists who try to separate Rakhine state from Myanmar. I think u are courageous enough to stand up and speak out. Thanks
13 June 2012 18:46
all of you believe this they will cut your necks.
အဲလို တိုင်ရင်းသာလိုနယ်မြေလု့ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နှိင်ဘူ အကောင်ဆုံက အေးအေးဆေးဆေးနေပါ အဲလိုလုမယ်ဆိုရင် တယောက်မှကျန်မှမဟုတ်ဘူနော် မင်းတို့ထက်ရက်စက်လို့ရတယနော်
13 June 2012 19:19
ထင်ပါတယ် ဒီစာရေးရင် ၀က်သားစားမလားလို့ မေးမယ်ဆိုတာ ဒီပုံက admin တင်တာပါ ကျွန်မပုံမဟုတ်ပါဘူး သူများဘာသာကို မတရားရှုံချတာမဟုတ်ဘူး တကယ့်အဖြစ်မှန်တွေ ကိုပြောတာဆို တစ်ခုလောက် ကျိန်နိုင်မလား သူတစ်ပါးဘာသာအား မတရားရှုံချပြောဆိုခဲ့ရင် ဘ၀ဆက်တိုင်း မိမိရှုံချခဲ့သော ဘာသာဝင်အဖြစ်မွေးဖွားပါစေလို့ လေ
ဒီက ညီမပြောတာတွေ မှန်တယ် မမှန်ဘူးဆိုတာတော့ ကျနော် မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မူဆလင်တိုင်းက မင်းလိုစိတ်ဓါတ်မျိုး၊ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိရင်ကောင်းတာပေါ့ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိူးတွေကလည်း အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ မူဆလင်တွေ ကို ဒုက္ခ မပေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်၇ှိအခြေအနေ မှာတော့ ဘယ်မူဆလင်ကိုမှ မယုံရတော့ပါဘူး။ ကိုရမ်ကျမ်းကို လိုက်နာတဲ့ မူဆလင်တိုင်းဟာ အားလုံးအတူတူ ဘဲလို့ ကျနော်တို့တွေ လက်ခံထားတယ်၊ ဒီတော့... ရှေဆက် ဘယ်မူဆလင်ကိုမှ မယုံတော့ပါဘူး.... ဝမ်းနည်းပါတယ် ညီမ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာ ဂရုစိုက်ပါ။
ဟုတ်တယ်ဒီလိုအမြင် မျိုးကုလားရော မြန် မာ ပါ မြင်ကြ ရင် ကောင်း မယ် ငါက ခရစ် ယာန် ဆိုတော့ နင့်ကိုကိုယ် ချင်းစာ ပါ တယ်
13 June 2012 22:20
ငါလိုးမခေါ်တောမဒီကောင်မ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာ ဒါကိုရေးတာ ဒီကောင်မ ဒီလောက်တောင် ရေးရဲမလား တွေးလည်း ကြည့်ကြအုံး မူဆလင်မှာ သစ္စာဖေါက်ရင် အသေစီရင်တတ်တယ်ကိုယ့်လူတို့ သေချာလည်း တွေးကြအုံးလုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်မလေးအမှန် ဆို ဒီခေါ်တောကောင်မလေး ကိုဘဲ မုဒိမ်းက ကျင့်ကောင်းမှာ မြန်မာ ဆယ်ယောက်လောက် ကျန်းမာရေး ကောင်းအောင်ပေါ့ စေတနာနဲ့ ပြောတာ ၊၊
sout yuu twe pal ... kalay twe pal yone mal ... ko har ko topic tin ... ko har ko comment pyan pay na ... hote top hote nay dar pal ... comment yay da lu ka2yat pal yay tat dal naw ... p top lal de site ka name ayan gyi dal htin par yat ... ae de 2yat pal lu twe ka comment win yay kya dal naw ... lOL hat kg site owner .... aku mha internet sa tom da lu twe ko pal ae de lo loat lo ya mal nar lal lar ??? taw taw arr nay yin ... ngar lee lar sote san par .... min toe kalar 1myo lone ko loe chin lone lo lee ka taw taw taung nay p!
13 June 2012 23:12
တ ကယ် တော့ အား လုံး က လူ သား တွေ ပါ ဘဲ
(အစ်မက တရားဟောကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် အစ်မကိုယ်တိုင်တောင် Demographic Jihad လုပ်ဖို့အတွက် မိုဟာမက်ထွင်ခဲ့တဲ့လူဖောက်စက်ပဲမလား အစ်မတို့လူမျိုးတွေ ဘာသာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေး မှာလက်ဝါးကြီးအုပ်ပြီး လူသက်ရှိအားလုံး muslin ဖြစ်မှအဆင်ပြေမယ့် မိုဟာမက်ရဲ့ဝါဒကိုအရင်ပြင်လိုက်ပါလား နောက်တောင်းပန်စာရေးရင်လည်း မိုဟာမက်ရဲ့ ၀ါဒအပေါ်မျှမျှတတ မြင်တဲ့အမြင်လေးတွေလည်းထည့်ရေးပေါ့) ဒီကွန့်မန့်လေးကို ထောက်ခံပါတယ်...ကဲမင်းဘာငြင်းချင်သေးလဲ...ငါတို့က အရှိကို အရှိတိ်ုင်းပဲမြင်တယ်...အင်းအားနည်းသေးရင် လူဖောက်ပြီးသာသနာပြုတယ်...အင်အားများလာရင် လူသတ်ပြီး သာသနာပြုတယ်...သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးက နေခုချိန်ထိ ကမ္ဘာ မှာအဲဒီလို လုပ်တဲ့ဘာသာ မင်းတိုဘာသာပဲရှိတယ် မိန်းကလေး..မင်းတို့ ဘာသာဝင်တွေ ဘယ်သွားနေကြတာလဲဆိုတာ အိပ်ရာဝင်တိုင်းနဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး သေသေချာချာတွေးကြည့်ပါဦးကွယ်
13 June 2012 23:37
ဒီစာကို ဒီကောင်မ ရေးတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး ငါလိုးမ ခေါ်တောမ ဒီကောင်မ ကို ဘဲ မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ကောင်းတာ
ကျေးဇူးပြုပြီး ခရစ်ယာန်ကိုဆွဲမထည့်လာပါနဲ့သူတို့ဘာသာနေပါစေမရိုးသားတဲ့ဘာသာရေးလှုံ့ဆော်မှု အလိုမရှိ။
14 June 2012 05:55
you right leave christian alone.im christian too.we dont wanna talk about religion.
14 June 2012 11:20
မှန် တယ် သူ မ ဟာ မွတ် စ လင် မှာ ကျု လီ ယာ၊ နာ စ တာ ပူ လီ ၊နဲ့ နေ မာလ် ဆို တာ ရှိ တယ် ။ သူ တို့ မှာ လည်း အ ယူ ၀ါ ဒ နဲ့ အ စွဲ မတူ တာ တွေ ရှိ တယ်။ အ ခု ဖေါ် ပြ တဲ့ သူ တွေ က ၁၅ ရက် နေ့ မှာ အိမ် တွေ မှာ ပဲ ၀တ် ပြု ဆု တောင်း ဖို့ ပြင် နေ ကြ တယ်။
14 June 2012 14:31
hey don't talk about Christian.. we are also Myanmar citizenship..we are not Yohingyar.. so,if you don't need us just leave christian to can stay peaceful in Myanmar. we are also willing to help Myanmar.. But some of you guys said "WE DON'T NEED CHRISTIAN".. ok as you wishes i will not help some of you guys but i will continue my prayer to God for all of you guys :)
14 June 2012 15:51
Fighter Manဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးချစ်ခင်လေး စားလျှင်ပိုကောင်းပါတယ်၊ ပင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးစားပါတယ်။
14 June 2012 18:57
တော်တယ် ကောင်မလေးဒါပေမယ့်လိုနေသေးတယ်ဘာလို့လည်းလို့စဉ်းစားလိုက်မင်းက ဂေါ်တော ကုလားမဟုတ်ဘူးဘ၈င်္လားကတောင်လက်မခံဘူးဟသတင်းပြန်ဖတ်လိုက်အုံးနောဒီကောင်တွေ ဒီမိုကရေစီကို ခုတုံးလုပ်နေတာ
14 June 2012 22:31
The post itself has no credibility nor are mist of the comments constructive. I am convinced the photo of this post is stolen.m
14 June 2012 23:13
Buddhism: Buddha said, Always forgive them " Yan-thu ko Myit-tar phint aung-myin yar ii ".Christianity: Jesus said, Forgive them " Some one slap on your cheek turn and give the other side to slap".Buddhism and Christianity teach us about love one another, love each other, love is greater than hatefulness. We hate each other and we kill each other will never ever end. But I don't know about Muslim, if Muslim will kill some one who is not Muslim he/she will go to Heaven, is it or isn't it?Is there any different Muslim teach about love and forgiveness? I thought there is many different kinds of Muslims in the world and I wish there is some good Muslim.God bless all Myanmar people and specially I pray for Rakhine brothers and sisters to get peace and happy life back soon.
တို့က မွတ်စလင် ဆိုသော ဘာသာရေးကို မမုန်းပါမွတ်စလင် ကိုးကွယ် သူတိုင်းလည်း မယုတ်မာပါတိုတိုင်းပြည်မှာလာ နေတယ် တို့တိုင်းပြည်က ထမင်းကိုစားတို့လူမျိုးတွေကို စော်ကားတဲ့ သူတွေကို ဒေါသဖြစ်တာပါ
Myo Chit Moe
15 June 2012 02:32
I like the you're thinking, really! If you really mean it!
15 June 2012 12:36
15 June 2012 12:37
မ ယုံ ပါ ။
15 June 2012 18:23
မြန်မာ ဆိုတာအေ၇းကြုံ၇င် သွေးစည်းတယ်နော်..။ကုလားမလေး ..။ကုလားက စတဲ့ကိစ္စ ဘယ်သူလွန်တာလည်း ပြန်စဉ်းစား သေ၇င်သေပါစေ သူသေကိုယ်သေ ချမယ်ကွာ........
15 June 2012 20:44
Sure, I agree. I m musilm but I love Myanmar as we are born in Myanmar. Islam is not rude religion and never teach rude practice. Not onlay Islam , all religions are giving guidance us good things . Pls don't mix religion and what rohinga people did in rakhine state.
အမျိုးကိုကမကောင်းတာပါမာမီရယ် ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဘူးသီးတောင်မြို့မှာ တစ်နှစ်လောက်နေဖူးလို့ပဲ
15 June 2012 23:40
ဒီ လို တော့ မ ပြော သင့် ပါ ဘူး သူ လဲ တစ် တပ် တစ် အား ပါ ၀င် ပေး တာ ပဲ လေ ဒီ လို စိတ် မျိုး ထားနိုင် တာချီး ကျူး စ ရာ ပီါု
Win Ye` Thu
16 June 2012 00:57
ယခု လက်ရှိဖြစ်နေတာ ဘာသာရေးနဲ့ မဆိုင်ပါ
ယခု လက်ရှိဖြစ်နေတာ ဘာသာရေးနှင့် မဆိုင်ပါ
ဘယ်ဘာသာကိုမှ ပုတ်ခတ်ဖို့ မကောင်းပါဘူးဗျ
16 June 2012 01:12
In Yangon I have some Bamar friends(guys and girls) who are look like exactly Bamar beautiful face, I thought they are Buddhists, I never knew that they are Muslims as well they never told me who they are. After what's happening in Rakhine State, they called me and said " please don't hate us we are not Rohingya, we are pure Bamar, only we are not Buddhists because we're born in Muslim family, but we are really Bamar National, we were born in Myanmar, we live as same as Myanmar life style, we wear Myanmar dresses(longyi and htamie), we eat Myanmar foods and we vote in Myanmar". I shocked and really confused because I never knew they are Muslims, they really look like as same as us, I am Buddhist and I don't eat pork(pig), goat meat and beef(cow), so some time when we went together and ate the foods I could not find out who they are. So I would like to suggest you that some of our Nationals are in Muslim religious, we must separate to understand our Myanmar Nationals are our friends, religious is religious, in our Constitution: "Freedom of Religions", I am not saying about Rohingya(Kalar) people, what I am saying is some of our pure Nationals who are in different religious(Muslim) or (Christian).
မွတ်ဆလင်တွေကို မမုန်းပါဘူး. မုန်းတာက အကြမ်းဖက်၊လူသတ်နေကြ တဲ့ သူတွေကိုပါ။ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ၊ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေပဲ ဒုက္ခရောက်နေကြတာပါ။
ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတဲ့သူက မကောင်းပါဘူး ။ ကောင်းတဲ့သူက ကောင်းကြပါတယ် ။ လူမျိုးအုပ်စုနဲ့မဆိုင်ပါဘူး ။ယုတ်မာတဲ့သူက လူမျိုးစုနဲ့မဆိုင်ဘူး ။ လူမျိုးစုတိုင်းမှာ လူယုတ်မာတွေရှိတတ်ကြပါတယ် ။ ဘာသာကိုးကွယ်မှုနဲ့မဆိုင်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်က ဘုန်းကြီးကျောင်းသားပါ။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ နေလို့တော့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ့မြေကိုတော့ လုလို့တော့ မရဘူးဆိုတာတော့ မင်းတို့လူမျိုးတွေ သိစေချင်တယ်
လူသားတိုင်းကိုတော့သနားတယ်လေ****ဘာသာသာသနာစော်ကားရင် ဒို့လဲမခန်ဘူးနော်* ဘာသာကိုမစော်ကားပါနဲ့နော် သာသနာကိုလဲမထိပါနဲ့ ရပ်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး မန္တလေးသံဃာတော်များ
Please do not blame other religion, think why Gaudama Buddah dressing Zartminthar style in stead of His real Lanquotti (Kalar Doti)style in Myanmar Buddahwins at all Pagodas?
16 June 2012 20:37
There is no God in Buddhism, Buddha means lightening one, Guaddama said there were many Buddahs before me, after me last buddah will come, but all Buddhists worship who wears Thingan, call him Phayar (God) and worship.
16 June 2012 22:42
17 June 2012 00:50
17 June 2012 01:04
This site is very good, starting with Muslim lady's article and many comments are little by little discussing about religious, this is very good, please discuss in comments but don't fight. Above one comment: Buddha(Guaddama) is not God, this kind of comment used to come from Christian religion. Christians think their God is the only one true God, but the problem is in Christianity there is3Gods(Trinity: God the Father God the Son and God the Holy Ghost) in one God, if you are not Christian you might be very confused. Well, in Myanmar language "PHA-YA" is in English language "God" and Buddhism never believe Holy Ghost is God. Buddhism believers will say our Buddhism God is much over higher than Holy Ghost, so Buddhism God is higher than Christian God, for Christians, you might be angry. No matter there is3Gods in one God (Christianity) or Many Gods(Buddhism) what ever as long as you believe your God, and you're doing good things, it's OK. Finally what about Islam(Muslim) religious, they believe their God Allah is greater than any others religious Gods, so do you like it, what they believe? No, Nobody like it, better we should not criticize each other, my God is greater than your God or my God is the only one true God your God is not truth. This is very complicated to discuss, why? Because there is many different kinds of Churches, different believing in Christianity as well as there is many kinds of Buddhism and many differents named of Muslim, even in same(one) religious so many different kinds of believing. Please don't blame each others and just respect each other's religious. Must be only One God for every one or there is No God? No one knows exactly who is really God.
17 June 2012 07:43
Don't trust any Myanmar muslims because they are real pro Rohingya muslims. Myanmar muslims are real enemies of Myanmar people because they support 1 million illegal Rohingya muslims live in Myanmar. They bribe Myanmar immigration officers for illegal Rohingya muslims. Myanmar Muslim pretend to be friends with Myanmar when Myanmar muslims population is less than 50% but Myanmar Muslims will kill you and Non muslims when Myanmar muslim population more than 50 %. Myanmar government must issue Islam control laws in Myanmar.
17 June 2012 10:28
ု့ဒီလို စိတ်မျိုး ရှိတာ လေးစားပါ တယ်ဒါပေမဲ့ မမက မိဘ ကမွတ်ဆလင်ဖြစ်လို့ မွတ်ဆလင်တာလားသေချာလေ့လာ ပြီးတော ယုံကြည်ပါ
Some of the Myanmar people believe and worship the traditional 37 in/out Spirits( Thone-Sed-Khun-Nat-Minn ) and Higher Spirits ( Thu-Ya-Wa-Di Meldaw, Shin U-Pa-Gote-Ta, Boe-Boe-Aung, Ba-Min-Gung, etc.....), but they believe those all Higher or Lower Spirits are under the God Buddha. Myanmar Buddhist people understand those all Spirits believed in God Buddha before and after they turned from human being to the Spirits who are not equal level with God Buddha. Many students love to worship and believe in Thu-Ya-Wa-Di Meldaw and most Myanmar sailers and fishermen believe in Shin U-Pa-Gote-Ta and U-Shin-Gyi specially who are working in sea and ocean.
18 June 2012 00:25
မွတ်စလင်မလေးရယ် နငိ စိတ်ထားဖြူစင်သလို ဟို ရိုဟင်ဂျာကုလားတွေက တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ ၀က်ကုလားတွေ
တောင်းတဲ့ဆု နဲ့ ပြည့် ပါစေ
20 June 2012 02:01
ှုI am an Arakanese. But,I like your opinion on Rohingers.In fact,it is notamatter of Religions.It isamatter of terrorism.May Allah bless you.
ကိုယ် တို့မြန် မာ တွေ ဟာ လည်း.. ကိုယ့် မြေ ပေါ် လာ နေ ပြီး အ ရိပ် နေ နေ အ ခက် ချိုး ချိူး လုပ် တာ ကို သည်း မ ခံ နိုင် ကြ တာ ပါ.......
Buddha was born in Lumbini vallage, Southwestern Nepalese Tarai, Nepal. Buddha was born 2600 years ago, he was not born in Sri Lanka.
22 June 2012 05:09
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒီလိုစကားမျိုးပြောလာပြီး လူတွေအားလုံးသိအောင် ဖော်ပြတင်ပြတာ မမှားပါဘူး ရဲရင့်တဲ့ စိတ်တတ်တစ်ခုပါပဲ အကြောင်းအရင်းပြောသောအကြောင်း ဝမ်းသာပါတယ် သူငယ်ချင်းလည်း အားလုံးအေးချမ်းအောင် ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်တတ်နဲ့ လေးစားပါတယ် ငယ်ချင်းလည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုး လွှတ်ငြိမ်းအောင် ဆုတောင်းပေးနေမှာပါ
22 June 2012 05:13
ဝမ်းသာပါတယ် ဒီလို မောင်နံမ စိတ်တတ်ရှိတဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းအောက် ရှိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငယ်ချင်းလည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို အဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောသော စိတ်တတ်တစ်ခုနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ငယ်ချင်းလည်း လွှတ်ငြိမ်းချမ်းအောက် ဆုတောင်းပေးနေမှာပါ
22 June 2012 06:13
ဒို့ဘာသာကreally human ဘု၇ားပာ မင်းတို့ဘာသာကnot human dog သား ၀က်မြေး ကြက်ယောက်ဖလေHumam လိုနားမလည်သောကောင်ေ၇
23 June 2012 21:23
ayu ma lay
u r right thinking and so proud of u
25 June 2012 02:28
Bro i think your very stuppied men ....in my country is good ....about you stupped get problem so much ....i tinks your mother no teach you eanyting....i am so said aboud you( MOM) and (DAD)
စောက်ကုလားမ..... အမွေးရိတ်ပြီး ဖင်လိုးသတ်မယ်
ဒီကောင်မ ကို အရေးထားစရာမလိုပါဘူး ငါတို့ သတိထားရမှာက မူဆလင် သောင်းကျန်းသူများဖြစ်တဲ့ အယ်လ်ကိုင်ဒါ အဖွဲ့ကိုပါ
27 June 2012 16:34
ကျန်တဲ့ ဘာသာဝင်တွေ အကုန်လုံး အတူတကွ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နဲ့နေထိုင်လိုရပါတယ်... မွတ်ဆလင် ဘာသာနဲ့က ဘယ်ဘာသာနဲ့မှ အစေးမကပ်ဘူး...တစ်ကမ္ဘာလုံး နဲ့ သူတို့ကပတ်ပြီးရန်ဖြစ်နေတာ သူတို့က ပဲ လိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်နေကြတယ်..စိတ်ပျက်စရာပဲ
30 June 2012 01:06
ဂျေဟာဒ် မဟုတ်ရင် ဘာလို့ နယ်မြေကျူကျော်ရတာလဲ.....?ဘာအတွက်နဲ့ မင်းပြောတဲ့ လူမူ့ရေးစစ်ပွဲကို ဖန်တီးတာလဲ...?
1 July 2012 13:34
လုံးဝ မယုံဘူး ယုံအောင်သီချင်း 1ပုဒ်ဆိုပြ ကုလားမတွေ ၀က်သားစားတယ် ကုလားမတွေဝက်သားစားတယ်.............
1 July 2012 13:37
လုံးဝ မယုံဘူး ယုံစေချင်ရင်သီချင်း ဆိုပြ ကုလားမတွေဝက်သားစားတယ် ကုလားမတွေဝက်သားစားတယ.......................
2 July 2012 00:37
၇ိုဟင်ဂျာ တွေလုပ်တဲ့ကိစ္စကို မွတ်စလင်အကုန်လုံးကိုထည့်မပြောပါနဲ့ မွတ်စလင်သူဘာသာသူနေတာ ၇ိုဟင်ဂျာနဲ့မွတ်စလင်နဲ့ဘာသာချင်တူတယ်ဆိုပေမဲ့ လူမှုနယ်ပယ်မှာ နေထိုင်ပုံချင်မတူပါဘူး အဲ့တော့ မကောင်းတဲ့လူကိုပြောချင်၇င် သူကိုပဲပြောကြပါ မဆိုင်တဲ့တခြားလူတွေကိုဆွဲမထည့်ပါနဲ့ ဘယ်ဘာသာတိုင်းမှာမဆို မကောင်းတဲ့လူတွေ့၇ှိကြတာပဲလေ အဲ့ဒါကိုနားလဲကြပါ၊၊ကျွန်တော်အခုပြောနေတာက လူသားချင်စာနာလို့ပြောနေတာပါ၊၊မကောင်းတဲ့လူတွေ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ကြသူအချင်းချင်း ၇န်ဖြစ်နေကြမလို့လား၊၊တောင်းပန်းတဲ့လူက တောင်းပန်းတာကိုလဲ မကောင်းတော့မပြောသင့်ဘူး၊၊ယုံတာမယုံတာကတော့ အကိုတို့အပိုင်းပါ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါပဲပြောချင်တယ်.................(ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှမသားချင်း စာနာပြီးတော့ ပြောကြပါ....)
ဒီအရေးအခင်း ရဲ့ အစက ဗမာရခိုင် အမျိုးသမီး တယောက်ကို မွှတ်စလင် ဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ သူကစော်ကားလို့ စဖြစ်ရတဲ့ အရေးအခင်းပါ ဟုတ်ပြီ တကယ်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့သူက ဒီအမျိုးသမီးကို စော်ကားခဲ့ ရင် ခင်ဗျားတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ
YOUR SISTERS WILL LIKE OUR THING VERY WELL, ASK THEM FIRST
2 July 2012 23:06
အဲဒီစကားတွေယုံချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယူပြီး ဘာသာပြောင်းပြီး သေသေချာချာပြန်ပြောပြမှလက်ခံမယ်။
my friend i can understand you , thanks for you opinion , i can share with you.good if you want to contact me tinaung888@gmail.com.
3 July 2012 23:31
appreciate your feeling but we feel very sorry for our people and no wish to believe anything
4 July 2012 14:48
ဘယ်မှာနေတာလဲ။ လိပ်စာလေးပေးအုံး။ ရခိုင်မလေးကို လုပ်သလိုမျိုး လာလုပ်ချင်လို့။
5 July 2012 11:31
ကုလားဆိုရင်တစ်ကောင်မှ ယုံရတဲ့ အထဲမှာမပါဘူးဟဟ
6 July 2012 20:42
Actually most of those who claim as Myanmar Muslims are Bengali Muslims living inside ( not in Rakhine state) Myanmar. We all can seealot of Bengali-origin, India-origin Muslims living in all part of Myanmar,most densely from Pathein to Sin-ngu. Some of their relatives are still in Rakhine state. They came to inside Myanmar by crossing Rakhine-Yoma ( safer route ), group by group. Their free-land is inside Myanmar there they can have equality, opportunity, etc. There is no MYANMAR Muslims. The word MYANMAR covers all 135 ethnic groups. Myanmar is not represent for single ethnic group nor any race. Not for Bamar, not for Kalar, not for Shan,etc. To make itabit clear,aKaren belongs to Karen ethnic group and his/her citizenship is Myanmar. So stop saying "Myanmar Muslims". KALAR is your race ( not ethnic group). You guys may have NRC somehow but you are still KALAR. The difference is white KALAR ( we called this to esp. British) and Black KALAR ( India-origin, Bengali-origin ) and Arab ( you all know )and Negro ( Africa-origin). You guys pretend to be peace-loving persons. That is not according to your Qur'an. In your religion, ifaMuslim is in trouble in the east part of the world, then those Muslims from the west must do something to help and you guys did it in the past, at present and will do it in the future. You may not declare it publicly.Thank you!
8 July 2012 00:49
Don't trust any Rohingya Bangladesh muslims or Myanmar muslims . Aung San Su Kyi can't trust any muslims because Tamil rebel muslim from Sri Lankan assassinated former India Prime Minister Rajiv Gandhi in 1991 . World leaders and people don't trust Muslim Body guards, Muslim security officers, Muslim car drivers.
11 July 2012 21:46
နိုင်ငံရေးငါမသိဘူးကွာ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့အတွက်အတ္တမရှိဘဲ တကယ့်လက်တွေ့လုပ်နေသူတွေ ပေါင်းပြီးတည်ဆောက်ကြပါ၊ ဥပမာ ယခင်က (ပင်လုံစာချုပ်မှလွတ်လပ်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေးမှပါတီစုံ)ယခု(လက်တွေ့လုပ်နေသူတွေ ပေါင်းမှဒီမိုကရေစီ၊ဒီမိုကရေစီမှပါတီစုံ) အားလုံးနည်းနည်းလေးမှားနေသလိုဘဲနော်။အရီးကြီးခေတ်ဆိုတာ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးမစစ်ပေမဲ့ လူစစ်ဖို့ လူပီသဖို့တော့လိုတယ် အမြဲဆန်းစစ်နေတယ်ကွာ၊တို့ကတာဝန်အရဆိုတဲ့စကား မင်းမိသားစုအတွက်ပါ တိုင်းပြည်အတွက် မဟုက်ပါဘူး ပြန်ဆန်းစစ်ပါအုံးကွာ။ မင်းကောလူသားတွေအတွက် သွားကြားထိုးတံ တန်ဘိုးလောက် လုပ်ပြီးပြီလါး၊ တိုင်းပြည်ဖျက်မဲ့ ငါကဘာကောင် ဘာရာထူးကွ ငါကခေါင်းဆောင်ကွ ဆိုတဲ့ဝေလေလေစုန်းပြူးတွေဖယ်ရှားပြီး လက်တွဲကြပါ၊ကောလဟာလနဲ့ အာချောင်မယ်ဆို ဝေးဝေးနေပေးပါ၊မင်းကတကယ်ဘဲ တာဝန်အရဘဲဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ်စိက်နဲ့ဘဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ လုပ်မယ်ဆိုရင်(ရှေ့ကသွားရင်အီးမပေါက်နဲ့ နောက်ကလိုက်ရင် ဖိနပ်မနင်းနဲ့ကွာ အရမ်းစိက်ဆိုးတယ်)ငါတို့နိင်ငံက ကမ္ဘာမှာအရမ်းနောက်ကြနေပြီ အချိန်မရှိပါ။လူသားအကျိူးပြုဂီတဥယျာဉ် (၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈) တာမွေလူမိုက်ကြီး ၀င်းကိုလှိုင်JJ (CLUB) နားမှာနေတယ်………http://www.facebook.com/media/set/?set=a.482823941733642.110392329.100000181218020&type=3&l=a6af18c97d
11 July 2012 21:47
12 July 2012 22:47
you are very bright.i haveasuggestion for you.You should scrutinize your religion.I think most of musilian country occur civil war.That is can be for your religion.I want to mean if religion is bad,this country can't be peaceful then first scrutinize with other religion.
နှစ်ပေါင်း အစိတ်လောက် မြန်မာအစိုးရကို လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ တပ်ဦး ကျောင်းသား တပ် မတော် (ABSDF) နဲ့ မြန်မာ...